Outlook Express Usabvisa Chishandiso. Outlook Express Yakadzimwa Email Kudzoreredza.
DataNumen Outlook Express Undelete ndiro yakanakisisa chishandiso chekudzosera maemail akadzimwa mu Outlook Express. Iyo inoshandisa matekinoroji epamberi kuongorora maDBB mafaira uye kusasarudzira akawanda emaemail ako sezvinobvira.
Ndapota shandisa DataNumen Outlook Express Repair kudzoreredza maemail kubva kuCORRUPT Outlook Express tsamba maforodha.
Ndapota shandisa DataNumen Outlook Repair kudzorera maemail nezvimwe zvinhu kubva kuCORRUPT Outlook PST mafaera.
4.90 / 5 (kubva 1,618 mavhoti)
Sei DataNumen Outlook Express Undelete?
Ingori katsamba kukuzivisa iwe kuti chirongwa chiri pamusoro chakashanda zvakanyanya uye ini ndakabudirira kupora almost 3000 maemail andanga ndaita netsaona
Ingori katsamba kukuzivisa iwe kuti chirongwa chiri pamusoro chakashanda zvakanyanya uye ini ndakabudirira kupora almost 3000 maemail andanga netsaona ndakadzima zvachose. Ini handizeze kurikurudzira kune vandinoshanda navo neshamwari.
SA Bias Industries Limited mutengo wemari yakaitika
Ndakaedza zvimwe zvigadzirwa zvitatu ndisati ndawana Advance Outlook Express Kudzorera. Mapurogiramu maviri akawana meseji dzese, zvisinei, iwo mameseji aive nawo
Ndakaedza zvimwe zvigadzirwa zvitatu ndisati ndawana Advance Outlook Express Kudzorera. Mapurogiramu maviri akawana meseji dzese, zvisinei, iwo mameseji anga asina dhata mumitumbi. Wechitatu haana kana kuwana ese emaemail aivepo. Kwayedza yekutanga neAdvanced Outlook Express Kudzorera kwakaratidza mafaera ese mukutongwa. Ini ndakatenga chigadzirwa uye meseji yese yandaipinda yaigona kuwanikwazve. Ichi chigadzirwa chinonakidza uye chakakodzera mutengo.
Nenzira, zvigadzirwa zvakaisvonaka. Ini ndinosiya zvangu kuvonga kune vakomana vakagadzira saka anobatsira maturusi.
Vakanyatso kugadzirisa mweya wangu.
Ini ndaive nedambudziko ne 1.5GB faira rekunze, ndainetseka zvakanyanya asi AODR yakagadzirisa nyaya yangu uye ikandibatsira kuti ndiwanezve data rangu, Thanks A lot to
Ini ndaive nedambudziko ne 1.5GB faira rekunze, ndainetseka zvakanyanya asi AODR yakagadzirisa nyaya yangu uye ikandibatsira kuti ndiwanezve data rangu, Thanks A lot to Datanumen.com Chikwata chakandibatsira mukusarudza chishandiso chakakodzera dambudziko rangu.
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
Tsigiro yekudzosera maemail akadzimwa muMicrosoft Outlook Express 5/6 tsamba maforodha.
Tsigiro yekudzosera dbx mafaera akachengetwa pane yakashatiswa midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekudzosera batch yemafaira dbx.
Tsigiro yekudzosa maemail mune dbx mafaera akakura se4GB.
Tsigiro kudzoreredza zvinyorwa zveemail.
Tsigiro yekuwana uye sarudza iyo dbx mafaera kuti adzokere pakombuta yemuno.
Yakabatanidzwa neWindows shell, kuti iwe ugone kudzoreredza maemail mune tsamba yefaira ine mamiriro (kurudyi tinya) menyu yeWindows Explorer nyore.
Outlook Express inochengeta ese maemail epositi folda mune inoenderana .dbx faira. Semuenzaniso, iyo Inbox.dbx faira ine maemail ayo anoratidzwa muInbox mail folda mu Outlook Express, iyo Outbox.dbx faira ine maemail ayo anoratidzwa muOxtbox mail folda, zvichingodaro.
Kana iwe ukadzima maemail akati wandei mune tsamba yefaira netsaona, saka unogona kushandisa DataNumen Outlook Express Undelete kuverenga iyo dbx faira inoenderana neiyo mail folda, kudzoreredza dzadzimwa maemail uye chengetera se .eml mafaera ayo anogona kuunzwa zviri nyore kudzokera ku Outlook Express.
Tsvaga iyo dbx faira inoenderana neiyo mail folda kana usati wadaro.
Ongorora: Usati wadzosera maemail akadzimwa muiyo dbx faira ine DataNumen Outlook Express Undelete, ndapota vharai Outlook Express uye chero mamwe mashandiro anogona kugadzirisa iyo dbx faira.
Sarudza iyo dbx faira panotorwa maemail akadzimwa:
Iwe unogona kuisa iyo dbx filename zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira.
By default, DataNumen Outlook Express Undelete ichaburitsa ese maakawana maemail mune dhairekitori xxxx_recovered, uko xxxx ndiro zita rehuori dbx faira. Semuenzaniso, yefaira Inbox.dbx, iyo default kuburitsa dhairekitori ichave Inbox_recovered. Kana iwe uchida kushandisa imwe dhairekitori, ndokumbira usarudze zvinoenderana:
Baya bhatani, DataNumen Outlook Express Undelete kuda start kudzoreredza tsamba dzakadzimwa kubva kune yakasarudzwa dbx faira.
Mushure mekudzoreredza, kana dzadzimwa maemail akawanikwa kubva kuiyo dbx faira zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura yakadzorerwa meseji ne Outlook Express nekudzvanya kaviri icon ye .eml faira mune inoburitsa dhairekitori. Kana kuendesa akawanda mameseji mune tsamba folda mu Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 yakaburitswa munaNovember 23, 2013
DataNumen Outlook Express Undelete 2.1 yakaburitswa muna Chikunguru 17, 2009
Kuvandudza mashandiro einjini yekudzorera zvakanyanya.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.0 inoburitswa munaKurume 5, 2009
Dzoreredza mameseji uye zvimwe zvinhu kubva kunherera kana kukuvara Microsoft Shanduko isinga chengeteke mafaira (.ost)
Tora maemail kubva kune huori Outlook Express dbx uye mbx mafaera.